Shiinaha 84 warshad jeermiska disha iyo alaab-qeybiyeyaal | Zhongxing
84 jeermis dile ah
Sifeynta aasaasiga ah
Jeermiska jeermiska dilaa wuxuu leeyahay shaqada dilka bakteeriyada cudurada ku dhaca mindhicirka iyo cocci suppurative, virus daciifa iyo wixii la mid ah.
Badeecadani waxay ku habboon tahay jeermiska dusha guud ee shayga, dharka cad, maqaallada wasakhaysan ee cisbitaalka.
500 g 84 jeermiska hore
500 g 84 gadaal jeermis dilaha
84 Jeermi-dilaha wuxuu leeyahay astaamaha soo socda:
1. qaacido cusub oo aan lahayn fosfooraska ilaalinta deegaanka iyo caafimaadka;
2. ma nadiifin karto oo keliya, laakiin sidoo kale nadiifin iyo sun-saarid.
84 Jeermis dilaha (Nooca II) waa jeermis ay ku jirto chlorine loo isticmaalo in lagu nadiifiyo deegaanka iyo dusha walxaha. Waxay ka kooban tahay maaddooyin sun-saarid xoog leh oo dili kara E. coli. Waxay ku habboon tahay
84 jeermiska ayaa badanaa loo isticmaalaa sun-nadiifinta iyo jeermiska sagxadaha, dharka cad iyo waxyaabaha wasakheysan ee isbitaalada guryaha, hudheelada, maqaayadaha iyo meelaha kale ee bulshada. Hababka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo waa:
1. Jeermiska maacuunta cuntada:
Isku qas xalka kaydka biyo qiyaas ahaan 1: 400 (1 qayb kaydka xalka + 399 qaybood oo biyo ah), ku qoy maacuunta si aad jeermiska ugu disho dareeraha la qasi jiray 20 daqiiqo kadibna biyo raaci.
2. Jeermiska dusha sare ee walxaha guud:
Isku qas xalka asalka ah ee biyo cabir ahaan u dhigma 1: 100 (1 qeyb oo ah xalka asalka ah + 99 qaybood oo biyo ah), tirtir, buufi, kuna xoq dusha sare ee shayga si loogu nadiifiyo xalka lagu qasay ee 84 jeermiska leh mudo 30 daqiiqo ah.
3. Jeermiska dharka cad:
Isku qas xalka kaydka biyaha cabir ahaan u dhigma 1: 100 (1 qayb kaydka saamiga + 399 qaybood oo biyo ah), kuqooji dharka cad si loogu nadiifiyo dareeraha laqasiqay 30 daqiiqo, kadibna biyo ku maydh.
4. Jeermiska sunta sunta ee isbitaalka
Isticmaal xalka kaydka si aad ugu qasto biyo saamiga 1:10 (1 qayb kaydka kaydka ah + 9 qaybood oo biyo ah) si aad u tirtirto wasakhda isbitaalka ee u baahan in jeermiska lagu dilo oo la dhigo xalka la qasay ee 84 jeermis dilaha ah si loo masaxo, loo buufiyo, loo xoqo iyo jeermiska dil 60 daqiiqo, ka dibna biyo raaci.
Magaca badeecada 84 jeermis dile ah
Magaca Badeecada Shaohu
Waxyaabaha ugu muhiimsan 4.0-6.0% (g / ml) sodium hypochlorite
La kulan lambarka caadiga ah Q / 320803LEK002-2013
Lambarka ansixinta (Su) Wei Xiaozheng Zi (2012) Lambar 3028-0062
Shaqaynta Wasakhda, jeermiska jeermiga, iwm.
Goobta Asalka Jiangsu, Shiinaha
Soo saare Huaian Zhongxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Hore: Maaskaro filter-is-nuugid
Xiga: Iodophor jeermis dilaha
Dhalo ku jira 84 Jeermis
Reerka 84 jeermis dilaha ah
Suufka Caafimaadka, Suufka jeermiska looga dilaaco, Suunka Kalkaalinta, Maaskaro Maaskaro Waji Caafimaad ah, Maaskarada Neefsashada, Maaskaro ka hortagga fayraska,